ဒီလေးယောက်မှာ ကျန်ခဲ့မယ်တစ်ယောက်က ဘယ်သူလဲ? – Sport – Local Sports – Duwun
ဒီလေးယောက်မှာ ကျန်ခဲ့မယ်တစ်ယောက်က ဘယ်သူလဲ?
အသက်ကျော် ကစားသမား ၃ ဦးပါဝင်ခွင့်ရှိထားလို့ နည်းပြက ပဏာမ စာရင်းမှာ ၄ ဦးရွေးထားတာပါ။
KKS 2018-07-27 11:15:24.0, 2018-07-27 11:15:24.0
အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ ယူ-၂၃ နဲ့အထက် ၃ ဦးပါဝင်ခွင့်ရှိလို့ မြန်မာအသင်းကို ဖွဲ့စည်းရမှာ လက်ရှိ ပဏာမ စာရင်းမှာ အသက်ကျော် ကစား သမား ၄ ဦးရွေးချယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာရှ အားကစားပွဲတော် ကစားဖို့ မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းကို ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေပြီး မကြာခင်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေးနိုင်ငံ ဖိတ်ခေါ်ဖလား ပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေးနိုင်ငံ ဖိတ်ခေါ်ဖလားကြီးကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအသင်းအပါအ၀င် တောင်ကိုရီးယား ယူ-၁၉ ၊ ဘာရိန်း ယူ-၂၃ နဲ့ ထိုင်း ယူ-၂၃ အသင်းတို့ ပါဝင်ကစားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအသင်းကတော့ အိမ်ရှင်ပီပီ ပြင်ဆင်မှု အားကောင်းကောင်းနဲ့ ပြိုင်ပွဲကြို အတွေ့အကြုံရရှိဖို့ ကစားမယ့် ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမယ့်လည်း အောင် မြင်မှုပါ တစ်ပါတည်း ပူးတွဲ ရရှိရေး အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
သူက မြန်မာ မဟုတ်ဘူး
အာရှအားကစားပွဲအတွက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီလူစာရင်းမှာ ယူ-၂၃နှင့်အထက် ကစားသမား ၄ ဦးကိုလည်း ထည့်သွင်းရွေးချယ်ထားပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အာရှအားကစားပွဲမှာ ယူ-၂၃ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမယ့်လည်း အသက်ကျော် ကစားသမား ၃ ဦး ထည့်သွင်းယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိလို့ မြန်မာ အသင်းကတော့ ကျော်ဇင်ထက်၊ဇော်မင်းထွန်း၊ရဲကိုဦးနဲ့ ဒွေးကိုကိုချစ် ၄ ဦးကို အခု ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပဏာမ စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ၃ ဦးသာ ပါဝင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်လို့ ဒီ ၄ ဦးထဲက ၁ ဦးကတော့သေချာပေါက် နေခဲ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မို့ လို့ မြန်မာအသင်းရဲ့ လက်ရှိ ယူ-၂၃ လူစာရင်းမှာ အမှန်တစ်ကယ် အားဖြည့်သင့်တဲ့ နေရာတွေက ဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာကို လေ့လာ ဆန်း စစ်ကြည့်ပါမယ်။
ဂိုး - ကျော်ဇင်ထက်
ကျော်ဇင်ထက်က ၂၀၀၇ ခုနှစ် ထိုင်းဆီးဂိမ်းတုန်းက မြန်မာအသင်းကို ဗိုလ်လုပွဲထိ တက်ရောက်စေခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ် အသင်းရဲ့ ပင်နယ်တီကို ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီး မြန်မာအသင်းကို ဗိုလ်လုပွဲတက်ရောက်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အောင်အောင်ဦးနောက်ပိုင်း အားကိုးရမယ့် ဂိုးသမားလို့ လူသိခဲ့ပါတယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခေတ်ကိုပြောင်းတဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အစမှာတော့ ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု ကမ္ဘောဇအသင်းမှာ ကစားခဲ့ပြီးနောက် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် လက်စွမ်းပိုင်း အားနည်းခဲ့ရပြီး လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ အတန်ကြာဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်။
၎င်းရဲ့အမှားတွေကို ပြုပြင်ပြီး ဇွဲကပင်အသင်းနဲ့ ပြန်လည်ကြိုးပမ်းခဲ့ရာမှာတော့ ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်က ကောက်လို့ ဆိုရသလို ရန်ကုန်ယူနိုက် တက်အသင်းက ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့အတူ လက်စွမ်းပြကစားလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျော်ဇင်ထက်ဟာ ၎င်းရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ လက် ရွေးစင်အဆင့်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ သူ့ရဲ့ လက်စွမ်းပိုင်း ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်လာခဲ့လဲဆိုတာ မှန်းဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်အားဖြင့် (၃၁)နှစ်(wikipedia) ရှိနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဂိုးသမားတစ်ယောက်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ ရှိနေပါ သေးတယ်။အသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်မှုအရရော၊ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ပွဲအတွေ့အကြုံနဲ့ လက်ရှိ ရန်ကုန်အသင်းမှာ ပွဲထွက်ကစားနေတဲ့ လက်စွမ်းအရ ပါဆိုရင်ကျော်ဇင်ထက်ဟာ မြန်မာအသင်းအတွက် အားကိုးထိုက်တဲ့ လက်စွမ်းရှိတဲ့ ဂိုးသမားတစ်ဦးပါ။လူငယ်ဂိုးသမားတွေကို တွဲခေါ်ပြီးအ ကောင်းဆုံး ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Photo - Football Tribe
နောက်တန်း - ဇော်မင်းထွန်း
ဇော်မင်းထွန်းက ဒီ ၄ ယောက်မှာ အထူးခြားဆုံးပါပဲ။အကြောင်းကတော့ သူ့လို ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းပြီး အရပ်အမောင်းမြင့်မားတဲ့ ခံစစ်မှူး မြန်မာ့ဘောလုံးလောကမှာရှာပါတယ်။ဒါကလည်း သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပထမအကျော့တစ်ခုတစ်လုံးကို မိခင် ကလပ် ရန်ကုန်နဲ့ ကစားခွင့်လွဲချော်ထားလို့ ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်မှုတွေကို ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်နဲ့သာလေ့ကျင့်နေရတဲ့ ကစားသမားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ အာရှ ခြေစစ်ပွဲလူစာရင်းမှာ လမ်းခွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ နည်းပြ ဂတ်က ခေါ်ခဲ့လို့ အနည်းငယ် ဂယက်ရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် ဇော်မင်းထွန်းကို လိုအပ် ချက်က သိသိသာသာရှင်းလင်းနေသလို ဇော်မင်းထွန်းကလည်း အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းက မကြာသေးခင်က ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ဆူဇူကီးပြိုင်ပွဲတုန်းက ဖြစ်ပြီး မြန်မာအသင်းကို ၎င်းရဲ့ ခေါင်းတိုက်ဂိုးတွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ကယ်တင် ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်ရင် အသင်းအတွက် ဂိုးပါသွင်းယူပေးတတ်တဲ့ ဇော်မင်းထွန်းကို ထိုင်းကလပ်တွေကလည်း စိတ်ဝင်စား နေပြီး လာမယ့်နှစ်မှာ သွားကစားမယ့် အရပ်အယောင်တွေ မြင်နေရပါတယ်။ ဒီလို ကစားသမားမျိုးကို နည်းပြအန်တွန်နီဟေး အားကိုးတာ အဆန်းတကြယ်ထုတ်ပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အလယ်တန်း - ရဲကိုဦး
ရဲကိုဦးလို့ ဆိုလိုက်ရင် ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ်းကို သတိရကြမှာပါ။ စင်ကာပူကို ၎င်းရဲ့ အလွတ်တည်ကန်ဘောကနေ သွင်းယူတဲ့ တိုက်ရိုက်သွင်းဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး မြန်မာကို ဂုဏ်တက်စေခဲ့သူပါ။အဲ့ဒီတုန်းက ကန်ခဲ့တဲ့ ကန်ချက်ကိုလည်း ၎င်းက ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတာ ထုတ် ဖော်ပြောဖူးပါတယ်။ဒါကြောင့် နည်းစနစ်ပိုင်းအရ ကျေညက်သလို ၊နည်းပြရဲ့ နည်းစနစ်ကိုလည်း အံ့ဝင်အောင်ကစားနိုင်သူ၊ကွင်းလယ်ကနေ ဘောလုံး ဖြန့်ဝေမှု အားကောင်းသူကို နည်းပြအန်တွန်နီဟေး ရွေးချယ်ထားတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ရတနာပုံ အသင်းကို ဦးဆောင် ကစားနေသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကျောနံပါတ် ၇ ပိုင်ရှင် ရဲကိုဦးကလည်း အားထားရတဲ့ ကွင်းလယ်လူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ မြန်မာအသင်း ကို ဘယ်လောက်ထိ ကူညီပေးနိုင်မှာလဲ။
Photo - Shan Utd FC
ရှေ့တန်း - ဒွေးကိုကိုချစ်
ဒွေးကိုကိုချစ်ကတော့ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ဖွား(WIKIPEDIA) ဖြစ်လို့ လက်ရှိူ-၂၃ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေနဲ့ အသက်သိပ်မကွာပါဘူး။ဒါပေမယ့် လက်ရှိ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ချန်ပီယံ ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်ကစားနေနိုင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦးမှာ နည်းပြစိတ်ကြိုက် အားသာချက်တွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်မှာ ရှားပါးတဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေထဲမှာ ဒွေးကိုကိုချစ်က သူမတူတဲ့ အားသာချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။အရပ်အမောင်းကောင်းတဲ့ ဒွေးကိုကိုချစ်ကို ရှမ်းယူနိုက်တက်မှာ နိုင်ငံခြားသား နည်းပြက နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားတွေနဲ့တန်းတူ ပွဲထွက်ခွင့်ပေးထားပြီး ဒီနှစ်မှာရှမ်းအတွက် ၁၆ ပွဲကစားပေးထားပြီး ၅ဂိုးသွင်းထားပါတယ်။ တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကို ဒဏ်ရာရနေချိန် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကို ကူဖို့ ဒွေးကိုကိုချစ်က အရပ်အမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ပါဝင်လာခဲ့ချိ်န်မှာတော့ နည်းပြစိတ်ကြိုက် နည်းစနစ်ပိုင်းအံဝင်ဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဒီကစားသမား ၄ ယောက်စလုံးက လက်ရှိ ပဏာမ အဆင့်မှာ အသင်းနဲ့အတူ ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်နေပေမယ့် ပြိုင်ပွဲနီးလို့ အပြီးသတ်စာရင်းတင်တဲ့ အခါမှာတော့ တစ်ယောက်ကို မဖြစ်မနေ ချန်ခဲ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်ကစားသမားက နိုင်ငံအတွက် အလုပ်အကျွေးပြုခွင့်လွဲချော်မလဲဆိုတာ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ စောင့်ကြည့် အားပေးရတော့မှာပါ။